जीवनमा पाप गर्नेलाई नर्कमा कस्तो सजायँ मिल्छ ? हेर्नुस् (फोटोफिचर सहित) – mero sathi tv
On २ मंसिर २०७४, शनिबार १०:५८
मनिसले जिवनकालमा पुण्य गरेमा स्वर्गमा बास हुने तर पाप गरेमा नर्कमा गएर पापको फल भोग्नुपर्ने मान्यता हिन्दु धर्मग्रन्थहरुमा छ । यमराजले पापीहरुलाई नर्कमा लगेर उसको पापको प्रकृति हेरिकन विभिन्न खाले चरम यातना तथा दण्ड दिने गर्छन् भनिन्छ ।
अहिलेसम्म नर्कमा गएर पापको सजायँ भोगेर फर्किएँ भन्ने मान्छे दुनियामा कोही नभएको हुनाले यी कुराहरु बकम्फुस्से जस्ता लाग्छन् । तर पापको फल नर्कमा भोग्नुपर्छ भन्ने विश्वास तथा डर हाम्रो मनमा निकै गहिरोसँग गाडिएको छ ।
थाइल्याण्डमा एउटा विचित्रको मन्दिर छ । जसलाई नर्कलोक पनि भनिन्छ । मन्दिरमा यस्ता भयंकर मूर्तिहरु छन् जसलाई हेर्दैमा डर लाग्छ । एकले अर्कोलाई काटेको, मारेको, तड्पाएको, रगत बगेको देखाइएका मूर्तिहरु मन्दिरमा छन् जसले नर्कमा दिइने विभिन्न यातनाका काल्पनिक स्वरुपलाई देखाउँछन् ।
वेट मेइ केट नोइ नामक उक्त मन्दिर थाइल्याण्डको चियांगमेइमा रहेको छ । मन्दिरका यी मूर्तिहरुलाई एक बौद्ध भिक्षुले बनाएका थिए । मानिसलाई गलत काम वा पाप नगर्नका लागि सचेत बनाउन ती भिक्षुले यस्ता मूर्ति बनाएका थिए । मानिसले जिवनमा गर्ने पापको फल नर्कमा गएर कसरी भोग्नुपर्छ ? भन्ने कुरा देखाउने उनको आशय थियो ।
प्रकाश दाहाल, जो प्रचण्डपुत्रमात्र नभएर माओवादी आन्दोलनका होनहार योद्धा पनि थिए (भिडियोहेर्नुहोस )